Umgangatho ophezulu wealuminium factory, ababoneleli - china aluminium sheet sheet
IPHEPHA LEALUMINI LAMA-7050
I-aluminium engama-7050 yinyango ephezulu yokuphatha ubushushu, ene-corrosion ephezulu kune-7075 aluminium. kunye nobulukhuni obungcono. Unobuntununtunu obusezantsi bokucima
IPHEPHA LEALUMINYU LAMA-7075
Iplate yealuminiyam engama-7075 eyeye-Al-Zn-Mg-Cu ialuminium enzima, eyomeleleyo, enobulukhuni obuphezulu ebandayo esebenza ngokubumba ingxubevange, ebhetele kakhulu kunentsimbi ethambileyo.
UXWEBHU LWE-ALUMINUM 6061
6061 aluminium sheet imveliso ekumgangatho ophezulu ingxubevange eveliswa unyango ubushushu kunye pre-ukuzoba for Mg kunye Si, kunye machinability ezibalaseleyo, weldability kunye neepleyiti nesingxobo, nokumelana elungileyo kunye ubulukhuni eliphezulu.
UXWEBHU LWE-ALUMINUM 6063 T6
6063 ingxubevange aluminium ipleyiti yi-Al-Mg-Si high plasticity ingxubevange, kunye iipropati processing egqwesileyo, iwelding ezigqwesileyo, extrusion kunye nesingxobo, nokumelana elungileyo, ubulukhuni, lula ipolishi, ukutyabeka, umphumo igcwala anodic kakhulu, yinto extrusion ingxubevange eqhelekileyo.
IPHEPHA LOKUXHUMELA I-ALUMINUM
I-6082 ipleyiti yealuminium licwecwe lealuminium elungileyo phakathi kweepleyiti zealuminium ezi-6 (i-Al-Mg-Si), ezinokumila okuhle kunye nokuqhubekeka ngokulula, ukusebenza kakuhle kwempendulo ye-anodic, ukutyabeka ngokulula, ukumelana nokulunga kunye nokuxhathisa i-oxidation.
IPHEPHA LEALUMINUM LAMA-5A05
Iphepha le-aluminium ye-5A05 yiruminium engaxutywanga erumini yothotho lwealuminiyam-yemagniziyam, ezona mpawu ziphambili kukuxinana okuphantsi, ukuqina okuphezulu kunye nobude obuphezulu. Kwindawo enye, ubunzima be-aluminium-magnesium alloy bungaphantsi kunolunye uthotho.
Iphepha leAluminiyam elenziwa ngombala, ixabiso lealuminium, Lixabiso Aluminium Sheets, aluminium ingxubevange 6061 ixabiso, Iphepha lePlread Aluminium Sheets, Iphepha lealuminium lama-7050,